Sicela Uyeke Ukuqhathanisa Ukuhlola kwe-NSA Nokumaketha | Martech Zone
Sicela uyeke ukuqhathanisa ukuhlola kwe-NSA nokumaketha
NgoMsombuluko, Juni 1, 2015 NgoMsombuluko, Juni 1, 2015 Douglas Karr
Enye yezingxoxo engiqhubeka nokuzibona zikhuphukela phezulu ku- I-NSA ihlola impikiswano ngukuthi izinkampani sezivele ziqoqa lolu hlobo lwemininingwane kubantu baseMelika ngemizamo yokumaketha.
Kulabo kini abangaphandle kwe-United States, uMthethosisekelo ucacile nge Ukuchitshiyelwa Kwesine kuMqulu Wamalungelo Wethu njengezakhamizi.
Ukuchitshiyelwa Kwesine kuMqulu Wamalungelo
Ilungelo labantu lokuvikeleka kubantu babo, ezindlini, emaphepheni, nasemiphumeleni, ekulweni nokuseshwa okungafanelekile nokuxhashazwa, ngeke lephulwe, futhi akukho zimvume ezizokhipha, kepha ngesizathu esingenzeka, sisekelwa isifungo noma isiqiniseko, futhi ikakhulukazi sichaza indawo ezoseshwa, nabantu noma izinto okufanele zithathwe.
Ukuthi ukholelwa noma cha ukuthi ukuqoqwa kwedatha ye-meta kufanele noma kungafanele kuhlanganiswe ngaphansi kwesiChibiyelo sesi-4 ngeke kuphikiswe lapha. Nginezinkolelo zami kodwa angiyena ummeli woMthethosisekelo (futhi ngisho nabo abavumelani).
Engifuna ukukuphikisa umgomo nendlela yokwenza iqoqo le-meta. Kwinkampani, le datha iqoqelwa ukwenza ngezifiso nokwenza ngcono ulwazi lomsebenzisi ku-inthanethi ngenhloso yokwandisa ukutholwa, ukugcinwa noma inani lamakhasimende. Lokho kuyisihloko esithinta abanye - ikakhulukazi ukuthi idatha iqoqwa kanjani nokuthi ngabe umthengi uyinikeze imvume yakhe noma cha. Isikhathi esiningi bayasenza, kepha kungcwatshwe kumum-jumbo osemthethweni wemigomo yokusebenzisa ovumelana nayo lapho ubhalisela insizakalo.
Ngiyazi ukuthi ngingumakethi ngakho-ke umbono wami awusetshenziswanga, kepha ngiyathanda ukuthi izinkampani zinginakile. Ngifuna ukwabelana ngolwazi nabo futhi ngifuna balisebenzise ukuthuthukisa ulwazi lwami lwamakhasimende. Uma lokho kusho izincomo zomkhiqizo noma imiyalezo ebhekiswe, sicela wenze! Ngiyazithanda izincomo zomkhiqizo!
Manje, ake silinganise umgomo wabakhangisi ku- umgomo wokuhlola kukahulumeni. Ukuphishekela kukahulumeni idatha ye-meta uku khomba amaphethini okuholela ekuphenyweni okujulile kwezakhamizi ngokususelwa ekuziphatheni kwazo. Lolo phenyo lungaholela ekutheni babekwe amacala futhi ekugcineni bavalelwe. Ngakho-ke ngenkathi abathengisi bafuna ukuthengisa okuningi ngemininingwane… uhulumeni ubheke ukuthola nokubopha abantu ukuze bavikele abaseMelika.
Lokho akusondelene nakancane ngakho-ke ngicela uyeke ukuqhathanisa lezi ezimbili.
Angiqondile ukuba nguntekenteke, kepha ngicela ubheke umlando wababoshiwe kuleli. Ngokuya ngemininingwane, Ama-95% okugwetshwa kwecala kungumphumela wezicelo zokuncenga ngaphandle kobufakazi obusemthethweni obake bwethulwa, futhi iningi alikaze lizihluphe ngokufaka isikhalazo.
Ngakho-ke ake sithathe umude omude lapha. Ngihamba kakhulu futhi ngixoxa ngezepolitiki online. Kungathatha isikhathi esingakanani ukufaka izingxoxo zami ekubuzeni uhulumeni ngezenzo zangempela zokulwa nohulumeni noma zamaphekula kulo lonke elase-United States? Kuleli sonto, ngiya eChicago. Mhlawumbe kuneseli lokulala eChicago ngaphakathi kwamamayela ambalwa wehhotela lami lapho uhulumeni eqoqa khona idatha. Kuzothatha ukugqagqana okungakanani ukuthola ubufakazi obanele bokubeka icala kimi? Hlanganisa lokhu nezibhamu enginazo futhi kuvela kanjani lokho?
Manje hlela konke - kusuka ekugxekweni nguhulumeni, inkonzo yami yezempi, ukuya kwami ​​emadolobheni amakhulu emhlabeni wonke, ubunikazi bami bezibhamu - bese ungeza kuwo amandla aphelele abashushisi bakahulumeni abanezabelomali ezingenamkhawulo. Anginazo izinsiza zokuqasha abameli abanamandla amakhulu ukuze ngivikele. Ingabe lokho ngempela kuyisikhathi eside? Angicabangi kanjalo. Futhi, umlando wethu ugcwele ngokuphelele abashushisi abeqise ngokweqile abalandele ukulahlwa yicala ngemuva kokutholwa benamacala okuthuthukisa ukulandela kwabo ezepolitiki.
Sicela ungaqhathanisi ukumakethwa kwezinkampani nezinhloso zokuhlola izakhamizi ukuphepha kwezwe. Zihluke ngokuphelele.
Ukunakwa kwe-NSA: Inothi nje lokuthi angilwi nohulumeni futhi angisoze ngathatha izikhali ngaphandle kokuzivikela. Ngisekela kakhulu ohulumeni basekhaya kanye nabomthetho. Ngivame ukuba ngumphikisi we-federalization, noma kunjalo, ngokungasebenzi kwayo, ukweqisa nenkohlakalo.
Tags: marketingnsa ukuhlola
Jun 3, 2015 ku-5: 45 PM
ngiyabonga, ekugcineni ezinye izingqondo !!!!
UJun 4, 2015 ngo-11: 53 AM
Imicabango emihle lapha uDoug. Kuyiqiniso ngokuya ngokuya siqala ukubona izingxoxo eziwela ngaphesheya zenzeka nge-NSA, idatha enkulu, futhi ikakhulukazi emhlabeni wezibalo zokubikezela. Njengoba usho, akuyona i-lens enembile yokubuka ukulandisa kodwa. Ngingasho ukuthi ingxenye yalokho okusiza abathengisi ukwenza umsebenzi ongcono "wokungaphazamisi" noma "ukungahambi kancane" yikhono elizungeze umqondo wobukhulu bamakhasimende. Kukhona into efana namakhasimende AMABI. Bangadla amandla nezinsizakusebenza, balimaze amazinga wakho wokuguqulwa, njll.
Kungani ngingafuna ukuphonsa inetha elikhulu laphaya ukuze ngibambe inqwaba yemfucumfucu, futhi kusobala ukuthi iyabacasula abantu kule nqubo. Uma ungitshele ukuthi nginezinketho ezimbili imikhondo engu-100 noma ihola ibhakede ngalinye ngama- $ 1,000. Kodwa-ke, bengazi ukuthi ukuhola okungu-1,000 kubukeka kakhulu njengamathuba avaliwe / awinile edlule. Ngizodlala amaphesenti futhi ngitshale ekuholeni okungu-100. Kungani? Ngoba kubaluleke kakhulu ukuthi sinikeze ozakwethu abathengisa ama-pitches amahle ukuze sijike kuwo. Ukuze uqhubeke nomfanekiso we-baseball, awufuni ukuthi abathengisi bakho baphinde batshintshe kuzo zonke izindawo zokudla okungenamsoco… maningi amathuba okuthi bazoteleka kakhulu. Kuzuzisa kakhulu ukukhulisa isilinganiso sokushaya sabaphenduli bakho emigodini abangayishayela.
Le mindset engingayiphikisa ayigcini nje ngokudala izingxoxo zokuthengisa ezisezingeni eliphakeme kepha futhi ithuthukisa ulwazi lwamakhasimende. Ngicabanga ukuthi njalo kuzoba nabathengisi eqenjini abazofafaza futhi bathandaze futhi basenze sibonakale njengama-NSA acabangayo. Njengoba singena ezweni lezinto ezintsha ku-DPM (ukuphathwa kwepulatifomu yedatha), izibikezelo zokubikezela, kanye nokuzenzekelayo - abathengisi banamuhla badinga ukuqhubeka phambili nalokhu kulandisa ngamandla weqiniso nezinhloso zalobu buchwepheshe. Ngaphandle kwalokho, sizoqhubeka nokuba yizisulu zalo mlando onosawoti we-Snowden.